रोजगार जानकारी – Yuwa Aawaj
Posted in रोजगार जानकारी
काठमाडौँ : कोरो'ना सं'क्रमण फैलिदै गएपछि बन्द भएको नेपाल स्थित कतार भिसा सेन्टर आजदेखि खुल्ने भएको छ । नेपाल र कतारबीच हवाई सेवा सुरु भएसंगै काठमाडौँ स्थित कतार भिसा सेन्टर खुल्ने भएको हो । कतार भिसा सेन्टरले समेत आजदेखि कार्यालयको अप्रेशन र अपोइन्टमेन्ट खुलेको जानकारी गराईसकेको छ । भिसा सेन्टरका अनुसार आज र भोली दैनिक ५० जनाको र जुन ९ देखि हरेक दिन २०० जनाको दरले काम हुने जनाएको छ । नेपाल स्थित कतार भिसा सेन्टरले कतारमा वैदेसिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरुको भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र कामदारको औंठाछापको सेवा दिंदै आएको छ । त्यस्तै सेन्टरमा कतार जाने नेपाली कामदारको सक्कली करारपत्रमा हस्ताक्षरको प्रक्रिया गर्न सकिन्छ । यसको अलावा कतार भिसा सेन्टरमा कागजात स्क्यानिङ, मेडिकल, बिमा र भिसा प्रोसेसिङका काम नेपालबाट पुरा गर्न सकिन्छ । जसको कारण नेपालीहरुले कतारमा पुग्नासाथ कतार आइडी
इजरायलमा रोजगार खुल्यो, योग्यता के-के चाहिन्छ ? यस्तो छ छनौट प्रक्रिया ।
काठमाडौँ : सरकारले इजरायलमा 'केयरगिभर' कामका लागि नेपाली श्रमिकहरू पठाउने निर्देशिका जारी गरेको छ । नेपाल–इजरायलबीच २०७७, असोज १४ गते भएको श्रम सम्झौता अनुसार पहिलो चर'णमा केयरगि'भरमा श्रमिकहरू पठाउने गरी निर्देशिका जारी भएको हो । इजरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार 'किएर गिभर' पठाउने सम्बन्धी 'निर्देशिका २०७८' इजरायल रोजगारीमा जाँदा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्न नमाने श्रमिक आफैंले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका जारी भएसँगै नेपाली श्रमिकहरू केयरगिभर कामका लागि इजरायल जान पाउने बाटो खुलेको छ। निर्देशिका अनुसार हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ परीक्षण, कल्याणकारी कोषको रकम र श्रम स्वीकृति लिँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ । तर उक्त सम्झौताअनुसार रोजगारदाताले उक्त शुल्क तिर्नैपर्ने भन्ने बाध्यता भने उल्लेख छैन । केयरगिभरमा जाने नेपाली कामदारको योग्यता ! केयरगिभरमा जा
काठमाडौँ : सरकारले इजरायलमा 'केयरगिभर' कामका लागि नेपाली श्रमिकहरू पठाउने निर्देशिका जारी गरेको छ । नेपाल–इजरायलबीच २०७७, असोज १४ गते भएको श्रम सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा केयरगिभरमा श्रमिकहरू पठाउने गरी निर्देशिका जारी भएको हो । इजरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार 'किएर गिभर' पठाउने सम्बन्धी 'निर्देशिका २०७८' इजरायल रोजगारीमा जाँदा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्न नमाने श्रमिक आफैंले ति'र्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका जारी भएसँगै नेपाली श्रमिकहरू केयरगिभर कामका लागि इजरायल जान पाउने बाटो खुलेको छ।निर्देशिका अनुसार हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ परीक्षण, कल्याणकारी कोषको रकम र श्रम स्वीकृति लिँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ । तर उक्त सम्झौताअनुसार रोजगारदाताले उक्त शुल्क तिर्नैपर्ने भन्ने बाध्यता भने उल्लेख छैन । केयरगिभरमा जाने नेपाली कामदारको योग्यता केयरगिभरमा